MacOS Sierra uye kushanda kwe beta shanduro | Ndinobva mac
Apple payakatangisa iyo yekutanga beta vhezheni yeiyo nyowani macOS Sierra inoshanda system munaJune 13 yevagadziri uye chinhu chekutanga chakauya mundangariro ndechekuti shanduko kuhurongwa dzaizoratidzwa. Chokwadi ndechekuti isu tanga tichishandisa idzi beta shanduro dzeanoshanda maMacs kweinopfuura mwedzi miviri uye tinofanirwa kutaura kuti kunyangwe shanduko dzichikosha, kuwanda kwakawanda kunoenderana nezvimwe zvigadzirwa, sekukwanisa kuvhura iyo Mac kuburikidza neApple Watch.
Mune ino chaiyo kesi, havasi vese vashandisi vanogona kutaura kuti inovashandira sezvo havazi vese vane iyo Apple smart smart, asi ichokwadi kuti macOS Sierra 10.12 inoshanda zvakawandisa chaizvo uye inogadzikana munzira dzese.
Chikamu chemhosva yekudzikama chinogona kukonzerwa nekuburitswa kweruzhinji beta vhezheni. Aya beta anofanirwa kugadzikana kuitira kuti vashandisi vasiri vashanduri vagone kuzvishandisa pasina matambudziko akakomba paMac, Apple inozviziva uye ichi ndicho chinhu chinosimbisa iyo firm kuti irege kuita zvikanganiso zvakakura mushanduro idzi. Izvo zvakare ndezvechokwadi kuti iwe unokwanisa kudzikamisa ivo zvishoma zvishoma mukuburitswa kwenhau uye zvimwe zvigadziriso mumaBetas, asi kune izvo ivo zvakare vane vasina kuendesa uye avo vhezheni.
Nezuro chete vakomana veCupertino vakaburitsa iyo yechitanhatu inoshanda system beta yevagadziri uye chokwadi ndechekuti shanduko dzinoita sedzisingakundiki, asi hadzisi dzekuipa zvakanyanya, zviri pachena kuti isu tinofanirwa kungwarira nemhando idzi dzebeta nekuti vanogona kunge vaine kushamisika kwakavigwa mukodhi asi chokwadi ndechekuti isu tinofunga kuti Apple ine njodzi shoma uye yaita basa rayo rechikoro nemazvo maererano nezvidiki glitches izvo zviri kugadziriswa nenzira inogara iripo.
Mune yangu nyaya uye mune yevamwe vazhinji vashandisi vane mavhezheni e macOS yeruzhinji beta hapana zvichemo zvakakomba nezvekushanda kwesystem nyowani yekuvandudza uye nekuvandudza akagadziriswa zvakanaka kune yekutanga base system iyo yatingati yakafanana kana kuti iri nani kupfuura yazvino OS X El Capitan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » MacOS Sierra uye mashandiro eBeta anoshanda
Ko iwo akafanana mabhatani kiyi musanganiswa anoshanda sezvakaita X 10.11?
Ini ndakaisa masvondo mashoma apfuura MacOs Sierra uye yangu Imac shanduko dzako kune dzakaipisisa. Kunyanya sezvo ini ndichishandisa dhizaini zvirongwa senge Illustrator apo iyo nguva yekuchengetedza mafaira inovhara sarudzo dzandaive nadzo kare, sekuchengetedza yeboardboard yandaida. Zvakare, kana uchibatanidza pikicha, chirongwa chinochengetwa, kana pandinoda kuisa pikicha ku twitter, mapeji ese epa internet anochengetwa. Ivo vanoziva imwe mhinduro kune izvi nemamwe matambudziko auri kuunza.
Mafaira akachenjera paMac: zvavari uye zvavari